ကျွန်တော်ဇင်အမျိုးသမီးများနေ့ပိုင်ဆိုင်နေရမည်ထိပ်တန်းငါးခုပိတ်ချောဘောင်းဘီ - Buddhatrends
နွေရာသီရာသီနှင့်ပူသောရာသီဥတုကဒီမှာနောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ကြပြီးခြောကျနော်တို့ပြီးသားအေးမြသောဆောင်းဦးနှင့်ဆောင်းရာသီညစဉ်းစားနေကြသည်။ ဒါကြောင့်အပူချိန်မြင့်တက်အခါဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာကိုရွေးချယ်ရာတွင်မှကြွလာသောအခါထွန်းတောက်ဘက်တွင်မျှစိုးရိမ်, ငါတို့သည်သင်တို့အမိုးပါတယ်။
ဤသည်ပြီးပြည့်စုံသောပစ္စည်းကိုသင်မြို့အချို့အမှုကို run ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာနွေရာသီရက်ပေါင်းရှင်သန်ရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်, ဒါမှမဟုတ်သင်တန်းကိုသင်အလုပ်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခါ, ဒါမှမဟုတ်သင်ရုံ iced ကော်ဖီခွက်အဘို့သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ချင်သည့်အခါ။
ကနည်းနည်းကြမ်းနှင့်ပါးလွှာတဲ့အထူး texture ပိုင်ဆိုင်၏ဤအရပ်မှပထမဦးဆုံးမှာနည်းနည်းပုံမှန်အတိုင်းနိုင်ပါတယ်ဝတ်ဆင်။ ဒါဟာပေါ့ပေါ့နဲ့နည်းနည်းကြော့နှင့် Semi-တရားဝင်နှစ်ဦးစလုံးမျိုးစုံအခါသမယအပေါ်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအဖြစ်ရေပန်းစားမဟုတ် ဂျင်းဘောင်းဘီဒါပေမယ့်သေးသူတို့ထက်ပိုမိုအဆင်ပြေနှင့်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
တစ်ခုတည်းသောအရာမိန်းမဆောင်ဘောင်းဘီတစ်ထည်ပိုင်ဆိုင်၏နှစ်သိမ့်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ပိတ်ချောမိန်းမဆောင်ဘောင်းဘီတစ်ထည်ပိုင်ဆိုင်သည်။ သူတို့ကအမှန်တကယ်အံ့ဘွယ်သောဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သင်အကြိုက်ဆုံးအပိုင်းအစ-on-the-go ကြလိမ့်မည်သလောက်အဆင်ပြေပေါ့ပေါ့။ သူတို့ကရိုင်းစိတ်ဝိညာဉ်ကိုယဉ်ပါးရမည် can`t ဆိုသညျကား, သင်အခမဲ့ဖြစ်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကိုယ့်ကိုကိုယ်စဉ်းစားပါလျှင်ထိုအသင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏။ အဆင်ပြေခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်စတိုင်ဖြစ်ခြင်းယဇ်ပူဇော်ခြင်းအဖို့မလိုအပ်, သင်ကအားလုံးရှိနိုင်ပါသည်။
2. Beige သပိတ်ချော Palazzo ဘောင်းဘီ
ဤအ Palazzo ဘောင်းဘီနှင့်အတူသင်၏ "ဖက်ရှင်ဂိမ်း" Up ကိုနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအဆင်ပြေတည်းခိုနေစဉ်စတိုင်ကြေညာချက်အောင်ရွေးချယ်ပါ။ ရိုးရှင်းသေးသူတို့အထူးလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်တက်ကြွနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်-ဝိညာဉ်တော်သည်မိန်းမတို့အဘို့ထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ အဆိုပါအဝါနုရောင်ရှိသောဖြစ်သောကြောင့်မြေသားသေံသင်အလွယ်တကူသင်ပယ်ထင်နိုင်သောအရာကိုမဆိုဤဘောင်းဘီတွဲဖို့ခွင့်ပြုနှင့် Palazzo / ကျယ်ပြန့်ခါးကိုဆင်းကနေဖြတ်မည်တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်အဘို့ထိုသူတို့သင့်လျော်သောစေသည်။
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ဖက်ရှင်သူတို့နှင့်သူတို့နှင့်တကွသင်ပေးနေကြတယ်သက်သာနှင့်လွယ်ကူသောအကြောင်းကိုအရူးဖြစ်ကြ၏။ သငျသညျသေးတစ်စုံကိုပိုင်ဆိုင်မထားဘူးဆိုရင်သူတို့ကပူပြင်းတဲ့နွေရာသီနေ့ရက်ကာလအဘို့အဆုံးစွန်-ရှိရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့, တဦးတည်းဝယ်ယူစဉ်းစားပါ။ သူတို့ကပေါ့ပေါ့သေးစတိုင်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့အရောင်တွေတစ်အရေအတွက်ထံသို့လာကြ၏။ ဒါကြောင့်မပိုငံ့လင့်အကောင်းဆုံးသင်ကိုက်ညီသောတဦးတည်းကိုရွေးပါ!
ဤရွေ့ကားပေါ့ပေါ့ချွတ်ပိတ်ချောဘောင်းဘီရုံနွေရာသီ, နေရောင်ခြည်နှင့်ပင်လယ် "မပြောတတ်" ။ အဆိုပါရေကြောင်း Vibe ပျော်ရွှင်မှုကိုနှင့်ပင်လယ်မဟုတ်ရမှာပေါ့ပင်အခါ, ရုံထောင့်ပတ်လည်မှာသောအသိဖြင့်သင်တို့ကိုဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ elastic ခါး, အချောင်မထိုက်မတန်, နှင့်ခြေကျင်းအရှည်ကပါးလွှာသောပိတ်ချောကိုသင်အလင်းပေးခြင်းပစ္စည်း, လွယ်ကူ, အဆင်ပြေခံစားချက်ကတဆင့်အသက်ရှူဖို့သင့်အသားအရေများအတွက်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်လွယ်ဖော်ပြထားခြင်းလုံးဝစုံလင်မဟုတ်ပါ။
5. Hippie ပိတ်ချောဘောင်းဘီ
သင်တစ်ဦးတက်ကြွနှင့်ထူးခြားသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားခြင်းနှင့်သင်ကပြသနိုင်ဖို့မကြောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အဲဒီသင်တို့အဘို့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောင်းဘီဖြစ်ကြသည်။ အသေးစိတ်စပ်ချုပ်ပညာသည်သင်၏ပျင်းစရာရက်ပေါင်းရောင်စုံနှင့်တောက်ပအောင်တစ်ဦး hippie နှင့်ပျော်ရွှင် Vibe ထွက်ပေးလိမျ့မညျ!
Tags: ပိတ်ချောဘောင်းဘီ, အမြိုးသမီးမြားအတှကျဘောင်းဘီမိန်းမဆောင်, Hippie ဘောင်းဘီ, Palazzo ဘောင်းဘီ, စင်းဘောင်းဘီ